Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်)
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Sodium Nitrite ကို အသက်အန္တရယ်ထိခိုက်နိုင်သော ဆိုင်ယာနိုက်အဆိပ်သင့်နေသူများတွင် sodium thiosulfate နှင့် တွဲပြီး ဖြေဆေးအနေနှင့် ပေးပါသည်။
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Sodium Nitrite ကို ဆိုင်ယာနိုက်အဆိပ်သင့်ချိန်တွင် သိသိချင်း ဆရာဝန်သည် ဆေးကို လျှင်မြန်စွာ အကြောထဲသို့ ထိုးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sodium Nitrite ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Sodium Nitrite ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Sodium Nitrite ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Sodium Nitrite ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sodium Nitrite ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Sodium Nitrite ကိုအသုံးမပြုခင်မှာ အောက်ပါအချက်များကို သိထားသင့်ပါသည်။
Sodium Nitrite သည် သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ သွေးဥများမူမမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်း နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏထက် နှစ်ဆကျော်လွန်ပါက သေဆုံးခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Sodium Nitrite ကို သွေးအားနည်းရောဂါရှိသူများတွင် သတိနှင့်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ထို့ပြင် Sodium Nitrite သည် ဆေးလိပ်ငွေ့များကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထိခိုက်ခြင်းဖြစ်သူများ နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် အဆိပ်သင့်သူများတွင် သွေးထဲရှိအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို ပိုနည်းသွားစေတတ်သောကြောင့် သတိနှင့်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Sodium Nitrite ၏ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးအချို့မှာ
နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြသနာများ (မူးလဲခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ သွေးနီဥများမူမမှန်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း)
ဗဟို အာရုံကြောစနစ်ပြသနာများ (ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ မျက်စိအမြင်းမှုန်ဝါးခြင်း၊ စိတ်အာရုံရှုတ်ထွေးခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း)
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများ (ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း)
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများ (မောပန်းခြင်း၊ အသက်ရှုမြန်ခြင်း)
စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဆေးထိုးထားသည့်နေရာတွင် ထုံကျဉ်ခြင်း၊ ပြာနှမ်းလာခြင်း၊ ကိုယ်ထဲတွင် အက်ဆစ်ဓါတ်များများခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ အင်ပြင်များထခြင်း၊ တကိုယ်လုံး ထုံကျဉ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium Nitrite ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sodium Nitrite က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium Nitrite ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Sodium Nitrite ကို သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 2.5 to5ml/minute နှုန်းနှင့် ထိုးနိုင်သော ပမာဏ 10 ml ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Sodium Nitrite 0.2 ml/kg (6 mg/kg or 6-8 ml/m2BSA)ကို သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 2.5 to5ml/minute နှုန်းနှင့် ထိုးနိုင်သော ပမာဏအများဆုံး 10 ml ဖြစ်ပါသည်။
Sodium Nitrite (ဆိုဒီယမ် နိုက်ထရိုက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Sodium Nitrite ကိထိုးဆေးတဗူးလျှင် USP 300 mg/10ml (30 mg/ml)ပါဝင်ပါသည်။
Sodium Nitrite ကို လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။